Imiyalelo kaGqirha: Amadoda kufuneka atye oku kutya kuthathu ukuze ube sempilweni | - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Imiyalelo kaGqirha: Amadoda kufuneka atye oku kutya kuku-3 seMpilo elungileyo
Iimbatyisi zeNoank.Ifoto: Ilya S. Savenok / Getty Izithombe zikaRodale
Ngenyanga kaNovemba okanye UMovember yinyanga yoLwazi ngezeMpilo yaMadoda Ukuzinikela ekuncedeni amadoda aphile ngolonwabo, impilo kunye nobomi obude. Sonke siyayazi indoda ehlala ubomi bayo ngokungazenzisiyo ihlawula kancinci ukuba ikhona ingqalelo kwimpilo nakwintlalo-ntle yayo. Amadoda aziwa ngokubandakanyeka kakhulu emsebenzini nakusapho kangangokuba ukuziqhelanisa nemikhwa elungileyo kwezempilo kuhlala kuluhlu lwabo.
Ukuba esi sisimo sabo sengqondo, izimo zengqondo zamadoda kufuneka zitshintshe. Amadoda ahlala kwi-avareji yeminyaka emihlanu ngaphantsi kwabafazi. Zininzi izizathu zoku, kubandakanya nento yokuba amadoda athanda ukuthatha umngcipheko ophezulu kwaye bahlala besenza imisebenzi yokurhafisa ngokwasemzimbeni bebeka uxinzelelo olukhulu kwimizimba yabo. Kodwa enye into amadoda anokujonga ukuzikhathalela njengelize okanye ukungabi yindoda ukuya kwinqanaba lokuba bakhethe ukungabamkeli kwaye bathathe amathuba abo ukuba into ethile enobulumko ayilunganga.
Sonke sifuna ukuba amadoda aphile ubomi obude, obunempilo kodwa xa amadoda ethanda ukungayikhathaleli impilo yabo, ngekhe kube kudala ngaphambi kokuba ukugula nezifo zize kunkqonkqoza emnyango wakhe.
Enye indlela ebaluleke kakhulu yamadoda anokuzikhathalela ngayo kukutya ukutya okusempilweni. Uninzi lwamadoda luyakuthanda ukutya kwaye ukutya abakukhethayo benza umahluko omkhulu ekugcineni impilo entle. Amadoda aneemfuno ezithile zesondlo eziyimfuneko ekuwancedeni agcine izihlunu kunye nobunzima bethambo, ukuthintela umhlaza wedlala lobudoda kunye nokunye. Ukukhetha ukutya okukhethiweyo kugcwele izondlo ezikhuthaza impilo yindlela efanelekileyo kuyo nayiphi na indoda eya kwicala lokugula. Akukho namnye ukutya komlingo okuzisa impilo elungileyo kwangoko. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba amadoda atye ipateni yokutya rhoqo ukutya okunotye ngeendlela ezahlukeneyo zezondlo.
Ukwenza amadoda aqale kwindlela ekhomba kwimpilo entle, nazi izinto ezi-3 zokutya onke amadoda anokukhetha mihla le ukuba ayenziwa rhoqo evekini yonke ukuqala uhambo lwakhe lokuya kwimpilo ephucukileyo. Oku akusiso kuphela kwendlela yokutya esempilweni efanele ukutyiwa yindoda. Kodwa ngokuqala ngezi zintathu, banokuqala ukongeza kancinci kwezinye ukutya okusempilweni okuphucula impilo yabo.
Isifo sentliziyo ngumbulali wokuqala wamadoda eUnited States nge umhlaza wedlala lobudoda Unobangela wesibini okhokelela ekufeni komhlaza phakathi kwamadoda. Enye yezona zinto zinamandla okutya okuchasayo okunceda ukuthoba ukuzama, ukuphucula intliziyo, ukujikeleza kunye nokusebenza kwamajoni omzimba kunye nokunciphisa umngcipheko womhlaza wedlala lendlala yintliziyo enempilo ye-omega-3 fatty acids efumaneka kwiintlanzi ezinamanqatha.
Iintlanzi ezinamafutha ezinje nge salmon, isardadi, ityhuna, i-mackerel, i-herring kunye ne-trout zininzi kwi-omega-3 fatty acids. Inkqubo ye- Umbutho wentliziyo yaseMelika icebisa ukuba wonke umntu atye iintlanzi kabini ngeveki.
I-Omega-3 fatty acids Zikwafumaneka kukutya okusekwe kwizityalo ezinje ngeflakisi, i-walnuts, isoya, ioyile ye-canola, kunye nokutya okuqinileyo okufana namaqanda.
Ngaphandle kokuba sisityebi kwi-omega-3 fatty acids, iintlanzi ezinamanqatha zikwangumthombo olungileyo wendalo wevithamini D othanda ukuba sezantsi kwizidlo zamadoda ezininzi.
Iimbatyisi - ngokwenene? Ayikuko ukuba amadoda akhethe okanye aya kufuna ukutya iimbatyisi mihla le, kodwa nantoni na enento yokwenza nokwabelana ngesondo ifumana ingqalelo yamadoda. Yaziwa kakuhle ngamandla abo okukhuthaza inkanuko, imfihlo yeembatyisi ivela ekuqulathe i-amino acid ezithile ezibangela ukuveliswa kwehomoni zesini kunye nesondlo esibalulekileyo-zinc. I-zinc zinc Inendima enkulu yokusebenza njenge-antioxidant kune-aphrodisiac njengoko ikwabandakanyeka kumakhulu eenkqubo zomzimba ekuveliseni i-DNA ukuya ekulungiseni iiseli.
Uphando luye lwabonisa zinc ukukhusela ngokuchasene nomonakalo weselula okhokelela kumhlaza wedlala lobubovu. Kuyaziwa ukuba i-zinc inyusa ukusebenza ngokwesondo kwenkqubo yokuzala kwendoda, kubandakanya ukwanda kokubala kwesidoda.
Ngosuku ngalunye indoda ifuna i-11 milligram yeZinc. Iimbatyisi ayisiyiyo kuphela indawo efanelekileyo yokutya yeZinc kwaye ayingawo onke amadoda afana neembatyisi. Eminye imithombo yokutya elungileyo etyebile kule minerali ibandakanya unonkala, ilobster, inyama yenkomo engenamafutha, inyama yehagu engondlekanga, ukutya okuziinkozo kwasekuseni okuqiniswe nge-zinc kunye neembotyi.
Amaqunube kunye neetsheri
Musa ukuphosisa amandla esondlo amajikijolo athambileyo kunye neetsheri. Ziqulathe ngaphezulu kwe-4,000 iikhompawundi ezineempawu ezimangalisayo zokulwa ne-antioxidant ezigqitha ngaphaya kwe-vitamin C. I-violet enetye elinqabileyo, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nebomvu yamajikijolo aqaqambileyo kunye namacherry abonisa i-flavonoid ethile ekhusela impilo enoxanduva lwezakhono zabo. - Anthocyanin .
I-Anthocyanin kunye nezinye iikhompawundi ezifumaneka kumajikijolo kunye neetsheri zibonisiwe ukuba zinokucothisa ukwehla kokusebenza kwengqondo okunokwenzeka ngokuguga. Izifundo ezininzi zibonise amaxesha ngamaxesha ukuba ukutya ngaphezulu iitsheri, iiblueberries, amaqunube amnyama, amaqunube kunye namaqunube kubonakala kukhusela ingqondo ngokugcina ukusebenza kwengqondo ngexesha lokuguga.
Yongeza amajikijolo kunye neetsheri yonke imihla kubandakanya nokufakwa kwisidlo sakusasa okanye i-oatmeal, edityaniswe kwi-smoothies okanye ityiwe njenge-snack kunye neqaqobana lamandongomane anje ngee-walnuts okanye iiamangile.
Ugqirha Samadi yibhodi eqinisekisiweyo ye-urologic oncologist eqeqeshwe kutyando oluvulekileyo nolwesintu kunye ne-laparoscopic kwaye yingcali yotyando lwe-robotic prostate. Ungusihlalo we-urology, inkosi yoqhaqho lwe-robotic kwisibhedlele i-Lenox Hill kunye nonjingalwazi we-urology e-Hofstra North Shore-LIJ School of Medicine. Ungumbhaleli kwezonyango kwiFox News Channel's Medical A-Team Funda ngakumbi kwi roboticoncology.com . Ndwendwela uGqirha Samadi blog kwi SamadiMD.com . Landela uGqirha Samadi Twitter , I-Instagram , IPintrest kwaye Facebook.
Ukuqonda ipleyiti yamandla amangalisayo eGym
Iminyaka eli-15 emva kwe-9/11, indlela ecacileyo yokwenza ukuhamba komoya kukhuseleke
Buza Kuphela Nini Ubhubhane? Le Ndlela yokuGcina iNkcazo ngeNtsholongwane iya kulila
IZiko lezoRhwebo leHlabathi eli-3, iZakhiwo ezi-5 ze-NYC ezide kakhulu, iiDebhu emva kokuCothiswa
Ndiyathemba ukuba i-imeyile yam ikufumene kakuhle
Eyona khrim ishukumayo yokususa amanqaku
iphepha lamahala amhlophe lokujonga iifowuni
iphuma nini iimfazwe ezintsha zeenkwenkwezi
URandy jackson (iqwarhashe)
Imiboniso ephezulu yokusasaza i-2020